ओलीको क्याबिनेटमा मातृका यादवको ताण्डव ! मन्त्रीपद खुस्कँदै
काठमाडाैं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृका यादब मन्त्री पदबाट बर्खास्तीमा पर्ने पक्कापक्की भएको छ ।
यादवलाई मन्त्रीबाट हटाएर सोमप्रसाद पाण्डेलाई विभागीय जिम्मेवारी दिने तयारी भईरहेको छ । पाण्डे यसअघि सरकारले असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न बनाएको टोलीका संयोजक हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस : उद्योगमन्त्री मातृका यादवले कहाँ गरे गडबढी ? किन पाएनन् उखु किसानले सवा तीन अर्ब भुक्तानी ?
चर्का क्रान्तिकारी कुरा गर्ने, तर सत्ताको मेसो मिल्दा सास दाबेर कुद्ने ब्यहोरा भएका यादवसँग हैरान भएकाले क्याबिनेटबाटै निकालिदिने मनस्थितीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिएका छन् ।
केही अघि यादवले आफु निकटका एकजनालाई उच्चपदमा नियुक्त गर्न मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रस्ताव गरेको, तर सो प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि हंगामा गरेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री ओलीले नै मातृकाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मानेका थिएनन ।
आफुले भनेअनुसार नभएपछि झोक्किएका यादवले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै लथालिंग पारिदिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र यादवका बीचमा विवाद बढिरहेको छ ।
सत्ताधारी (ने.क.पा.) का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अमेरिकामा रहेकाले मातृकाको मन्त्रीपदबारे तत्काल निर्णय गर्न ओलीले सकिरहेका छैनन् । दाहाल नेपाल फर्किएर नजोगाए मातृकाको मन्त्रीपद जाने पक्कापक्की भएको छ ।